Ukusela utywala ngelixa uthintela amayeza okubulala iintsholongwane: Ngaba kukhuselekile ukuba ungakwenza? - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Impilo-Ntle Inkampani, Imfundo Yezempilo Izilwanyana Zasekhaya Uluntu, Impilo Inkampani, Iindaba Inkampani Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Ukuphuma Iindaba, Impilo Uluntu, Inkampani Impilo Imfundo Yezempilo, Iindaba
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> Ngaba ungasela utywala kunye namayeza okubulala iintsholongwane?
Ekugqibeleni! Impelaveki ilapha kwaye ukulungele ukukhaba umva kunye neminikelo embalwa. Kodwa linda-usasebenza kule khosi ye-antibiotics ugqirha wakho omiselweyo kwiveki ephelileyo emva kwakho (faka igama losulelo oluyingozi apha) ukuxilongwa. Ngaba ukusela utywala kukhuselekile? Okanye ngaba kufuneka ulinde de ugqibe irejimeni kwaye usuleleke ngokusemthethweni?
Iziphumo zotywala kwizifo
Ukwenzela ukubuyela kwimeko yesiqhelo kungangcono ukuba ungatsiba i-vino kunye nevolontiya lomsebenzi otyunjiweyo, utshilo uBrian Werth, uFarm.D., Unjingalwazi oncedisayo IYunivesithi yaseWashington School of Pharmacy eSeattle.
Utywala buneziphumo zokuzikhusela emzimbeni, kwaye bunokuthintela ukubanakho ukulwa nosulelo oluthabathela i-antibiotics, utshilo uGqirha Werth. Kwaye kunokwenza ukuba iziphumo ebezingalindelekanga zibe mbi.
Uthetha iziphumo ebezingalindelekanga njengesisu esikhathazayo, isicaphucaphu, ukugabha, urhudo, kunye nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni, zinto ezo zizeziphumo ebezingalindelekanga phakathi kwezona zininzi — ukuba ayizizo zonke — iintsholongwane.
Ukuba uphosa utywala kumxube… ungafumana uhlobo lokudityaniswa kwale micimbi, utshilo, esongeza ukuba oku kungagcina ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
Ngapha koko, ngokweNational Sleep Foundation, ukusetyenziswa kotywala kungaphazamisa umgangatho wokulala . Kwaye ekubeni ubuthongo bubaluleke kakhulu kwinkqubo yokuphilisa, kungcono kungcono ukunqanda nantoni na eya kukugcina ungafumani ZZZ ngokwaneleyo ngelixa amajoni akho omzimba esebenza ekulweni nosulelo lwebacteria.
Ngaba kukhuselekile ukuxuba amayeza okubulala iintsholongwane kunye notywala?
Ngokumalunga nokhuseleko lokwenyani, iindaba ezimnandi zezokuba akukho siphikiso ngqo phakathi kokusetyenziswa kotywala kunye neyona ntsholongwane. Nangona kunjalo, igama eliphambili nali uninzi . Iintsholongwane eziqhelekileyo njenge ifumobillin kwaye izithromycin , umzekelo, azichaswanga ( ngokweZiko loLawulo lweZifo , kwizigidi ezingama-270.2 zemithi yokubulala iintsholongwane ebhalwe ngo-2016, izigidi ezingama-56.7 zazenzelwe i-amoxicillin kunye ne-44.9 yezigidi yayiyi-azithromycin). Kodwa ezinye zikhona, kwaye ukuzixuba notywala kunokuba yingozi, utshilo uGqirha Werth.
Zeziphi i-antibiotics onokuzenza hayi usele utywala kunye?
Kukho ii-antibiotics ezithile ezinonxibelelwano ngokuthe ngqo kunye nendlela yotywala yemetabolism, utshilo. Kwaye ezo zezona zibeka umngcipheko omkhulu wokuba nefuthe elibi ngqo kulawulo ngokubambisana notywala.
Amachiza ekuthethwa ngawo? Iiflegi ( imithombo ; Oku kubandakanya imigqaliselo yeefom zobufazi kunye nefom ye-tablet yomlomo), iTindamax ( tinidazole ), IBactrim ( isulfamethoxazole-trimethoprim ) kunye Zyvox ( yomgca ) ngabona baphuli-mthetho baphambili. Uya kudinga thintela utywala kunye neemveliso ezinotywala ngelixa usela la mayeza, Kaninzi kwiintsuku ezimbalwa emva kokuthatha i-metronidazole okanye i-tinidazole.
Qiniseka ukuba ujonga iilebheli kwimithombo yotywala efihliweyo; ukuhlanjwa ngomlomo okanye amayeza okukhohlela anokuqulatha utywala. Usokhemesti wakho sisixhobo esikhulu ukuba ufuna uncedo!
Iziphumo ebezingalindelekanga zotywala kunye nezibulala ntsholongwane
Nangona kunjalo, kwimeko yokuba wena yenza vala ugqirha yenye yezi, yazi ukuba ukudibanisa la mayeza okubulala iintsholongwane kunye notywala kunokubangela ukuhlangana kakhulu neziyobisi, ezinokuthi zikhokelele: ekonakaleni kwesibindi, uxinzelelo lwegazi, ukubetha kwentliziyo ngokukhawuleza, ukugungxula ulusu, ukozela, isiyezi, kunye neentloko. Amanye amayeza okubulala iintsholongwane, njengeZyvox, anokuba nempendulo embi kwiintlobo ezithile zotywala, njengebhiya yempompo okanye iwayini ebomvu. Ngezi zizathu, ukusela naliphi na inani lotywala kufuneka kuthintelwe ngokupheleleyo ngelixa usela la mayeza, ngokweKlinikhi yaseMayo .
Ewe, ezi zizikhokelo nje ngokubanzi. Ukuthetha ngqo nogqirha wakho okanye usokhemesti malunga nemiyalelo yakho ethile kusoloko kucetyiswa. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukuba ukrokrela ukuba unengxaki yokuhlangana namayeza akukaze kubuhlungu ukubiza ugqirha wakho, utshilo uGqirha Werth.
Ukuba umntu uziva kakubi kakhulu, kunokuba kufanelekile ukuba uhlolwe, utshilo.
Ngaba ndingalisebenzisa ikhadi lokonga i-SingleCare ukunceda abaguli bam?
ungaba selangeni kwi-amoxicillin
yintoni inqanaba eliqhelekileyo leswekile kumfazi
indlela yokuya kugqirha ngaphandle kweinshurensi
ngaphezulu kweyeza lokubala leentlungu zesisu kunye nokugabha
Kuthatha ixesha elingakanani ukuthambisa isitulo se-dulcolax ukusebenza
Ngaba ukuthatha inzala notywala kuyayichaphazela